पत्याउनुहुन्छ ? चामलको गेडामा तीन देशको झण्डा « The News Nepal
पत्याउनुहुन्छ ? चामलको गेडामा तीन देशको झण्डा
काठमाडौं । क्यान्भास, लोक्ता वा नेपाली कागजमा चित्रकला प्रसस्तै भइरहन्छ । दृश्यचित्र होस् या मुहार चित्र, थान्का वा पौभा चित्र ठूलाठूला आकारमा बनाउनु सामान्य हो र धेरै चित्रकारले यस्ता चित्र बनाइरहेका छन् । एउटा चालमको गेडोमा निकै कम कलाकारले चित्र कोर्ने कलाकार बिरलै होलान् ।
त्यसमाथि पनि तीन तीन देशका झण्डा एउटै चालमको गेडोमा अटेको छ । विश्व चर्चित तीन साहित्यकाको चित्र एउटै चामलको गेडोमा बनेको छ । अनि नेपाली मौलिक पोशाकमा सजिएका एक पुरुषको चित्र पनि एउटै चामलको गेडोमा उनीएको छ । कतिपयलाई यो नौलो पनि लाग्नसक्छ ।
उक्त चित्र अहिले तपाईं काठमाडौँमा जारी ‘नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय चित्रकला प्रदर्शनी’मा हेर्न सक्नुहुन्छ । नेपाल र भारतको चित्रकला प्रदर्शनी भनिए पनि यहाँ एकजना बङ्गलादेशी चित्रकार खालिफा पलाश पनि सहभागी छन् । उन नै हो चामलको गेडामा चित्र बनाएर प्रदर्शनीमै चर्चा कमाउने चित्रकार । उनको चित्रकला हेर्न सामान्य आँखाले भ्याउँदैन । आइ ग्लासको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
“साह्रै राम्रो लाग्यो, यति सानो चामलको गेडामा यसरी चित्र बनाउँदाको मेहनतलाई सम्मान गर्नुपर्छ,” चित्र अवलोकन गर्दै मनोविद् डा नरेन्द्र ठगुन्नाले भने । उहाँले एउटा चामलको गेडोमा तीन देशको झण्डा बनाएर आपसी सम्बन्धलाई देखाउन खोज्नुभएको छ ।
नेपाल र भारत सिमाना जोडिएको जिल्ला हो । सिमाना नजोडिएको जिल्लामध्ये सबैभन्दा नजिक करीब २७ किलोमिटर दुरीमा रहेको बङ्गलादेश सम्बन्धका हिसाबले नजिक छ । “यी तीन देशको आपसी सम्बन्धलाई प्रगाढ छ भन्ने सन्देश दिन एउटै चामलको गेडोमा तीन देशको झण्डा समावेश गरेको हुँ,” चित्रकार पलाशले भने ।
चित्र हेर्नकै लागि आइग्लासको प्रयोग गर्नुपर्छ भने बनाउँदा कति गाह्रो भयो होला ? उनलाई चित्रकला हेर्न आएका दर्शकको पहिलो प्रश्न हुन्छ, “तपाईलाई चित्र बनाउन गाह्रो भएन ।” सहज रुपमा उत्तर आउँछ “अरु बनाएजस्तै सामान्य नै लाग्छ, दुई÷तीन दिनमा एउटा चित्र बनाइन्छ ।” अर्को एउटा गेडोमा भने नेपाली मौलिक पोशाकमा सजिएका एक पुरुषको चित्र छ ।